SomaliTalk.com » Qurbojoogta: Maxaa Ka Jira Dhaqan Xumada Lagu Sheego?
Qaxii Afrikada waa laga soo baxay, waxaa la yimi wadamada America, Australia iyo Europe, waxaa la gaarey in CAYRTA qaadashadeeda lagu faano, ilaa ay Wadamada iyo magaalooyinka ay Soomaalidu u badan tahay dadwaynahooda aad ugu xumaadaan. Bal dawo vidiyowgaan Naag Austrlian ah ee uu waraystey wariye Soomaaliyeed oo ku eedaysey ganacsatada Soomaalida in xataa aysan dukaamadooda furin waqtiga loogu talo galay:
Dhinaca kale, waxaa sii badanaya burburka qoysaska Soomaaliyeed ee qurbaha. Taas oo ay keentay in labada qof ee is qaba aysan wadashaqayn iyo ismaqalka uusan ka dhaxayn inta aan ka ahayn xariga RABI ee isu xalaaleyey, si ay ilmo u dhalaan oo keli ah. Waxaad arkaysaa Aabe saacado meel iska fadhiya oo aan ka warqabin xaalada caruurtiisa ay ku sugan yihiin, qaadka afka ugu jira maahee. Sidoo waxaad arkaysaa Aabayaal aan la nooleen caruurtooda oo la yiri waxaa erisey hooyadii caruurta. Taas oo cadaynaysa in Qurbojoogta rag iyo dumar ay ka siman yihiin in aysan helin qof u macneeya macnaha guurka – bal fiiri vidowga ninkaan Soomaliga ah ay gabadhii u dhashey canuga uu magaciisa kasi waayey ay u diidey in uu soo booqdo: